China Oo 5 Maalmood Oo Xidhiidh Ah Aan Laga Helin Kiisas Coronavirus Ah Oo Cusub – somalilandtoday.com
China Oo 5 Maalmood Oo Xidhiidh Ah Aan Laga Helin Kiisas Coronavirus Ah Oo Cusub
(SLT-China)-Dawladda China ayaa ku warrantay in maalinkii shanaad oo xidhiidh ah aan gudaha dalkaas laga diiwaan gelin wax kiisas ah oo la xidhiidha cudurka Coronavirus ee caalamka kusii fidaya, kaasi oo markii hore kasoo billaamay dalkaas.
Dhinaca kale magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa sare u qaadday tallaabooyinka lagu xakameynayo fayruska loo soo dhoofiyo, iyada oo dhammaan diyaaradaha caalamiga ah ku amartay in laga billaabo Isniinta ay u weecdaan magaalooyin kale, sida Shanghai iyo Xian, halkaasi oo rakaabka ay ku mari doonaan tijaabo.
Beijing ayaa diiwaan gelisay 10 kiis oo ah Coronavirus ay qabaan dad dibedda ka yimid, sida uu sheegay Guddiga Qaran ee Caafimaadka, taasi oo ka yar 13-kii la diiwaan geliyey maalin ka hor.
Guddiga Qaran ee Caafimaadka ma sheegin dalalka ay rumeysan yihiin inay ka yimaadeen dadka qaba Coronavirus, hase yeeshee mas’uuliyiinta Beijing ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen kiisaska dad ka yimid dalalka Spain, Britain, France, Mareykanka iyo Pakistan.
Tirada guud ee dadka uu xanuunka ku saameeyey dalka China ayaa Axaddii aheyd 81,093, halka tirada dhimashada ay taagan tahay 3,270.